VONDRONA TIA TANINDRAZANA : MANAMPY IREO ZOKIOLONA TENA TSY MISY MPIAHY – MyDago.com aime Madagascar
VONDRONA TIA TANINDRAZANA : MANAMPY IREO ZOKIOLONA TENA TSY MISY MPIAHY
Efa miatraika mivantana amin’ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka ankehitriny ny fahantrana. Tsy misy tsy mikaikaika ny rehetra satria sahirana tanteraka. Nitondra faisana ny vahoaka malagasy nandritra izay telo taona sy tapany nitondran’ireo mpanongam-panjakana ny firenena. Anisan’ny hiajadian’ny fahasahiranana lalina ireo zokiolona tsy misy mpiahy eny amin’iny faritra Ambaniala Itaosy iny. Tsy nitazam-potsiny izany anefa ny Vondrona Tia Tanindrazana (VTT) fa nitondra ny anjara birikiny tenyan-toerana. Zokiolona miisa 80 no nahazo fanampiana avy amin’ny VTT, izay nahitana zokiolona 10 isaky ny faritra 8 ao amin’ny fokontany Ambaniala Itaosy. Fitafiana sy savony no natolotra tamin’izany omaly tao amin’ny fokontany Ambaniala. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny VTT ny Me Rabemananjara Noro dia tsy vao izao izy ireo no nanao asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona, fa efa nisy ny hetsika teny amin’iny faritra Atsimondrano sy Avarandrano iny. Miasa ho an’ny tanindrazana hoy izy, no nijoroan’ny fikambanana, ary hanampy ireo tena tsy misy mpiahy satria any no hitoeran’ny fahantrana. Taorian’ny alatsinainy mainty 26 janoary 2009 hoy Me Noro no nitsangana ny Vondrona Tia Tanindrazana ary tamin’ity taona 2012 ity vao nijoro ara-panjakana ny fikambanana. Ny solontenan’ny zokiolona nandray fitenenana kosa dia nisaotra ny VTT noho izao fanampiana natolotra azy izao. Naneho ny hafaliany ihany koa ireto zokiolona tsy misy mpiahy ireto.
Marihina fa ny VTT dia fikambanana iray ao anatin’ny Ankolafy Ravalomanana.Mitaky tsy misy fepetra ny fodian’ny filoha Ravalomanana an-Tanindrazana.Resy lahatra tanteraka fa ny firotsahan’ny filoha Ravalomanana amin’ny fififdianana filoham-pirenena ho avy izao no fanalahidin’ny fampandrosoana ny firenena , izy irery ihany no afaka hampandroso an’i Madagasikara haingana hoy ity fikambanana ity.
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 octobre 2012 29 octobre 2012 Catégories Politique
Précédent Article précédent : MITAKY NY FIALAN’IREO JENERALY MISAKANA NY FODIAN’I DADA NY VAHOAKA
Suivant Article suivant : Rakotomanjato Rodin : Nanolotra « kit’s scolaire » ho an’ny CEG Mangatany